Version 0.7.1 – Hapụ ụgbọ oloko na-emekwa Rolling
January 31, 2011 site na rịọ 9 Comments
Hapụ ụgbọ oloko na-emekwa Rolling
Ọrụ transposh na commencing na zuru ọsọ, mgbe ọhụrụ version na-eru a ufọk ufene obodo anyi na-agbali hapụ ya, pụta ka izugbe oriri. Nke a na obere version adịghị eweta ihe ọ bụla ọhụrụ isi atụmatụ ma ọ na-aga idozi ụfọdụ ihe dị mkpa anya.
N'ihi ya, na-enweghị n'ihu ado, na-ahapụ nyochaa mgbanwe:
Abụọ asụsụ translations ka ngwa mgbakwunye e kwukwara,, Dutch n'enyemaka nke Roland Nieuwendijk na Russia na-enyemaka nke Ndị Rom Matusevics. Ọ bụrụ na ị chọrọ inyere, dị nnọọ ịkpọtụrụ anyị ma na anyị ruo mgbe ebighị ebi ekele (na Ebe E Si Nweta)
Marking nke excerpts e ofu nke tp_language posts
N'ike n'ike belata ọnụ ọgụgụ nke nchekwa data gbara ajụjụ na translatable urls (site na puku otu)
Idozi ka akpaka translation mgbe amaonye translation akwadoghi na na google maqbx chekwebe
Idozi buddypress (na na nchekwube ndị ọzọ) redirections ke otu omume peeji nke ndị ọzọ abụọ ibugharị ibe
Idozi n'ihi na nlaghachi azụ na mgbe post translation ịsụgharị niile
Anyị na-atụ anya ka ị ụtọ a version, na anyị na-eche gị kwuru na nzaghachi.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi, Hapụ ọkwa Akpado Na: nyere translation, obere, tọhapụ, ọsọ nkwalite
February 4, 2011 na 1:31 na
Ezi ịhụ oké ọrụ anọgide! Naanị ngwa ajụjụ, bụ n'ebe ọ bụla okwu na gzip mkpakọ nke a sụgharịrị ịbụ peeji nke ma ọ bụ nanị ndị PHP usoro m na-eji?
February 10, 2011 na 12:13 na
Amaghị m ihe m banyere ihe ọ bụla okwu na gzipping na plugin, na plugin omume na-ejikarị eme tupu gzipping-ewere ọnọdụ
e nwere ike inwe nsogbu m maara ihe ọ bụla nke, ma ọ bụrụ na i nwere ike mụta nwa ya, dị nnọọ ike a tiketi anyị trac.
February 8, 2011 na 12:29 obi
M na-eji Transposh version 0.6.6 , ugbu a, m na-achọ nweta nkwalite a version. Ya mere, otú m nwere ike ime? na otú o si emetụta na nchekwa data.
Amasị m nke a plugins nke ukwuu. Ma nnukwu nsogbu bụ ọ na-akpata elu ibu nkesa, na m na saịtị na kwụsịtụrụ na ọtụtụ mba na enye. Na nke a version, ahụla m “N'ike n'ike belata ọnụ ọgụgụ nke nchekwa data gbara ajụjụ na translatable urls (site na puku otu)” na m atụ anya na ọ bụ eziokwu.
February 9, 2011 na 11:36 obi
Ị nwere ike nweta nkwalite ozugbo gị wordpress interface, ma ọ bụ site adịrị ndị ọhụrụ version n'elu nke okenye.
M na-eche na naa Mbelata ga-etinye gị na saịtị dị ka ị na-eji url translation kpamkpam.
Jisie, m ga-ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị na-akọrọ gị ahụmahụ ndị ọhụrụ na version na anyị
February 18, 2011 na 3:33 obi
M na-eleru gị nkwụnye maka ojiji na m otu website na nnọọ m masịrị ya na ihe o nwere ike ime… oké ọrụ!
Enwere m ajụjụ (nke ikekwe bụ a mma arịrịọ). Nke a na-nri ebe-ekwurịta okwu gị ya? Ọfọn, ebe a ọ na-aga Ko:
Enwere ụzọ na m nwere ike igbochi ngosipụta nke a post ka nanị otu asụsụ? Dị ka ihe atụ, Achọrọ m biputere otu isiokwu banyere otu ihe mere na Brazil, na na Portuguese, n'ihi na m na Brazil na-agụ akwụkwọ. Achọghị m ka m na ọ sụgharịrị ọ bụla ọzọ asụsụ. Ọ bụ na o kwere omume?
Na, otu onye ọzọ ajụjụ: Achọrọ m tinye ụfọdụ mmadụ mgbasa ozi akara ngosi (facebook | twitter | LinkedIn, wdg), nke njikọ kwekọrọ ekwekọ sụgharịrị peeji nke. Enwere ụzọ m nwere ike hazie ndị URLs maka onye ọ bụla asụsụ?
N'ihi na tupu oge maka enyemaka gị, ma na-edebe ihe ndị magburu onwe ọrụ.
February 19, 2011 na 12:44 na
Daalụ maka Ekele, ugbu a ka ajụjụ
1. E nwere ihe a na klas wrapping maka na “only_thislanguage” nke ga-eme a nke na-egosi na a nyere asụsụ, ị nwere ike tinye a koodu yiri nke ugbu a tp_language meta njikwa na posts nke ga-ekwe posts na-ọbọp site na nke a na klas na therefor ime ka ị na chọrọ
2. i nwere ike iji zuru ụwa ọnụ my_transposh_plugin ihe na asụsụ n'ime ya iji nweta kwuru mgbanwe, ndị mmadụ na-eji ya mgbe na-egosipụta dị iche iche ihe oyiyi maka asụsụ dị iche iche
February 27, 2011 na 11:52 obi
Ebe ọ bụ na WP 3.1 hapụ m ọzọ ike idezi translation: dị ka m na-elele checkbox maka a asụsụ (na), m webste nloghachi na m n'asụsụ page (french). Echiche ọ bụla banyere nke a?
Eric "Ọgaranya" na-ekwu,
February 28, 2011 na 10:19 obi
ụtụtụ ọma, na-ekele gị nke ukwuu maka gị Transposh plugin, o yiri ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma (WordPress 3.0.5) na m na saịtị. translation bụ ngwa ngwa; ọ dịghị ọhụrụ window imeghe “google ma ọ bụ ndị ọzọ” dị ka, gị ngwọta bụ “apụghị ịhụ anya”. na ịnara “Nchekwa onwe chọpụta asụsụ maka ọrụ” bụ adaba ! daalụ
March 1, 2011 na 3:58 na
Nke a version dị mma. Belata elu ibu nkesa n'ike n'ike. Ko, mgbe ụfọdụ, m na saịtị bụ njikọ ikpodatà njehie.